Nhanganyaya - Jinjing (Boka) Co., Ltd.
Jinjing (Group) Co., Ltd. iri munzvimbo yekuzvarwa kweChina magirazi indasitiri, Boshan Zibo Shandong.Pave nemakore 117 kuti Jinjing iite budiriro yeChina flat glass indasitiri kubvira pakavambwa kambani yegirazi yekutanga muChina muna 1904. Innovation neR&D ndiyo yekutanga kukosha kweJinjing.Parizvino, Jinjing Boka rakakurumbira muR&D, kugadzira, kugadzira uye kushanda kwesoda ash, girazi uye zvinobva pazviri, gore rega rega pane madhora gumi nemashanu emadhora eR&D.Jinjing nderimwe remabhizinesi akakosha ekuvaka zvinhu muChina.Iyo ine zvikamu zvipfumbamwe zvinosanganisira Shandong Jinjing Science uye Technology Stock Co., Ltd, Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd, Ningxia Jinjing Science and Technology Co., Ltd, Shandong Haitian Biochemistry Co., Ltd, Qingdao Jinjing Glass Stock Co., Ltd. , Jinjing Technology Malaysia Sdn Bhd.
Jinjing ine rakasiyana girazi chigadzirwa chimiro, uyezve Jinjing nderimwe remabhizinesi mashoma ane marudzi maviri eyepasi E coating tekinoroji, anosanganisira inodziya katatu, kaviri uye imwe sirivha isina offline Low-E uye yepamhepo Low-E girazi;Pamusoro pezvo, Jinjing ine girazi rekupedzisira rakajeka, girazi retindi, girazi remotokari, girazi rakagadzirwa, girazi rinodzivirira moto uye marudzi ese ezvakadzama kugadzirisa zvigadzirwa.
Zvichivimba nemhando dzakasiyana dzechigadzirwa, pamwe nekumusoro uye kuzasi kweindasitiri cheni zvakanakira, Jinjing yanga ichipa vatengi mhinduro dzehunyanzvi zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvayo zvinoshandiswa zvakanyanya mumahwindo ekupedzisira nemagonhi, madziro emaketeni, skylights, passive imba nezvimwe. minda.Jinjing ine SGS, CE, REACH, SGCC, IGCC, AU/NZ, SIRIM, SGP laminating zvitupa, iyo PPG certificated ICFP, uye zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanyanya kuEurope, America, Japan, South Korea, maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Australia, Middle Mabvazuva nemamwe matunhu.
Jinjing icharamba ichiwedzera hunyanzvi hwayo hweR&D.Kune rimwe divi, ichagadzira zvigadzirwa zvitsva senge photovoltaic / solar thermal power generation uye BIPV mumunda wesimba rezuva.Nekune rimwe divi, icharamba ichigadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoshandisa simba zvichibva pambiri sirivheri & katatu sirivheri yekuputira Low E girazi.
Vashandi Vanorumbidza Musangano
Employee Varaidzo Makwikwi
Manheru eGore Idzva reChinese